Bekucwebile emabhishi aseThekwini - Ilanga News
Home Izindaba Bekucwebile emabhishi aseThekwini
Bekucwebile emabhishi aseThekwini
Bekuzulazula amaphoyisa abeqaphe isimo
kusuka kwesokudla nguMkhuzi wamaPhoyisa KwaZulu-Natal, uLieutenant General Khombinkosi Jula (ophethe isigubhu) uNgqongqoshe wezokuThutha nokuPhepha koMphakathi KwaZulu-Natal, uMnu Bheki Ntuli (omise izithupha) eceleni kwakhe yiMeya yeTheku uMnu Mxolisi Kaunda. ISITHOMBE: SITHUNYELWE
ANGENE agxila ezindlebeni zabantu baKwaZulu-Natal amazwi kaMengameli Cyril Ramaphosa mayelana nokuthi abantu bangalubhadi olwandle izolo ngoLwesithathu ukunqanda ukubhebhetheka kweCoronavirus njengoba bekushaya umoya emabhishi aseThekwini.
Emabhishi bekuzulazula amaveni amaphoyisa, kungekho noyedwa osondela eduze kwamanzi.
Ngesikhathi uNgqongqoshe wezokuThutha nokuPhepha koMphakathi KwaZulu-Natal, uMnu Bheki Ntuli, iMeya yeTheku uMnu Mxolisi Kaunda noMkhuzi wamaPhoyisa KwaZulu-Natal, uLieutenant General Khombinkosi Jula, beyohlola isimo emabhishi izolo, izivakashi ezisuka ezindaweni ezikude bezihleli emabhasini phambi kwamahhotela agudle ulwandle, bebodwa abami ngaphandle beshaywa wumoya.
Abadayisi abangathandanga ukukhuluma nabezindaba, bebecambalele ezindaweni abasebenzela kuzona ngenxa yokuthi besingekho isiphithiphithi esivamile uma kuyileli holide.
UMnu Kaunda uthi banqume ukuthi babekhona emabhishi ukubheka ukuthi ngabe abantu bayawulalela yini umyalelo kamengameli.
“Ngijabulile uma ngibona kunje ngoba kusho ukuthi izakhamizi zethu nezivakashi zikuthathile esikutshelwe ngumengameli ukuba sivale amabhishi ethu ngezinsuku ezithile.
“Kukhona-ke lelo dlanzana elifafaza izindaba ezingamanga ezinkundleni zokuxhumana, lithi amabhishi agcwele ayanyimfika. Silapha nje nomhlonishwa uNtuli, sifuna ukuqinisekisa abantu ukuthi amabhishi avaliwe, akukho muntu obhukudayo.
“Abantu mabayeke ukusabalalisa amanga ngeTheku,” kusho uMnu Kaunda.
UNkz Antoinette Bosman waseFree State, uthe bafike kulesi sifundazwe ngeSonto bezovakasha. Uthe ukuvalwa kwamabhishi akubakhathazi kakhulu ngoba bayasiqonda isimo izwe elibhekene naso.
“Kuyangijabulisa ukuthi neziphathimandla zedolobha ziyabonakala emabhishi ukuqinisekisa ukuthi kazibi khona izephulamthetho.
“Lesi simo sizogcina sidlulise, okwethu wukuthi sibekezele silandele yonke imiyalelo ebekiwe,” kusho yena.
Previous articleUtholwe esonakele okusolwa ukuthi ubulawe yizesheli
Next articleUSuthu nokhisimusi kubalandeli